Olee otú naghachi faịlụ ehichapụ ma ọ bụ sitụbeghị Mkpofu on Mac OS X
Gịnị mere ma ọ bụrụ na anyị na-ekpebi efu Mkpofu Bin?
Mgbe anyị bupụrụ Mkpofu Bin (ala nsị na-adịghị gụnyere), ihe anyị na-ehichapụ bụ n'ezie bụghị faịlụ. Ị dị nnọọ ida ohere nke faịlụ site na usoro. The ohere nwere site ehichapụ faịlụ na-akara dị ka "dị ka iwerekwa", n'ihi ya na-ehichapụ faịlụ ịnọgide n'ụzọ anụ ahụ na-emebibeghị na mbanye ruo mgbe ha na-overwritten site ndị ọzọ faịlụ. The faịlụ ga-enwe nanị ehichapụ mgbe ha na-overwritten site ọhụrụ faịlụ. Iji gbochie overwriting mkpa ka anyị kwụsị iji Mac ozugbo ọ bụrụ na anyị chọrọ iji naghachi ehichapụ data si Mac ahịhịa.
Olee otú naghachi ehichapụ faịlụ site Mac Mkpofu
Iji megharịa bupụrụ Mkpofu na Mac OS, i nwere ike ịgbalị a mgbake omume - Mac Mkpofu Iweghachite. N'ebe a, anyị ji obi umeala nwere ike ikwu Wondershare Data Recovery for Mac, ihe dị mfe na-eji data mgbake maka Mac ọrụ, nke bụ dakọtara na Mac OS X Mavericks. Na ya enyi na enyi interface, ị nwere ike naghachi ahịhịa Mac dị nnọọ na ụfọdụ clicks. Ọ bụrụ na ndị ohere na-adịghị overwritten, gị ehichapụ faịlụ nwere ike natara na 100%.
Gịnị mere Wondershare Data Recovery for Mac
Naghachi gị furu efu data ruo 550+ faịlụ na ụdị furu efu n'okpuru n'ọnọdụ dịgasị iche iche!
Weghachite data furu efu ruru ka usoro, nhichapụ na inaccessibility.
Naghachi dị iche iche faịlụ na ụdị dị ka oyiyi, Archives, akwụkwọ, songs, videos, wdg
Enye gị ohere iji napụta data si MacBook, iPod, Mac desktọọpụ, USB draịva, dijitalụ ese foto, mobile ntị na ndị ọzọ nchekwa media.
Naanị na-agụ na-agbake data, ọ dịghị eri eri, modifying ma ọ bụ ihe dị ka na, 100% mma.
Buru n'uche: Mgbe ibudata ma wụnye ọ bụla omume na ebe ị furu efu gị faịlụ, n'ihi na nke a nwere ike overwrite gị furu efu data. Download na wụnye ya na ọzọ nkebi.
Nzọụkwụ nke Ịchọpụta Mkpofu on Mac
Nzọụkwụ 1 Họrọ Lost File Iweghachite mode
"Echefuola File Iweghachite" nwere ike undelete faịlụ site na a nkebi ma ọ bụ mbughari media, n'agbanyeghị ehichapụ site Wụk + ihichapụ ma ọ bụ bupụrụ n'ebemkpofuozi.
Nke a mgbake nhọrọ na-atụ aro na mbụ, n'ihi na ọ na-ewe gị nanị minit ole na ole iji weghachite ehichapụ faịlụ site Mac ahịhịa. Ọ bụrụ na unu ghara inwe ike ehichapụ faịlụ na a mode, i nwere ike ịgbalị "Raw Iweghachite" gasịrị, nke nwere ike naputa tọn faịlụ gụnyere ndị furu efu ogologo oge gara aga, ihe oge iwesa ya.
Nzọụkwụ 2 Iṅomi na ọnọdụ nke Mkpofu on Mac
Họrọ ezi uche mbanye ebe ị na-ehichapụ gị faịlụ, ọ bụrụ na ị nwere ihe karịrị otu draịva na gị Mac. Wee pịa "iṅomi" ịchọ gị ehichapụ faịlụ.
Nzọụkwụ 3 Preview na-agbake faịlụ site na Mac Mkpofu
Ị bụ ebe a ugbu a. Mgbe iṅomi risịrị, faịlụ niile ị na-ehichapụ na-depụtara na mbụ ụzọ, n'agbanyeghị na ị na-ehichapụ ha kpọmkwem site Library, desktọọpụ, ma ọ bụ ahịhịa, wdg Obi abụọ adịghị, faịlụ ị sitụbeghị Mkpofu nọ "Mkpofu" nchekwa. Ma ọ bụ i nwere ike chọọ faịlụ aha ke search mmanya na n'elu na weghachite ya ngwa ngwa.
Tupu mgbake, ị nwere ike ihuchalu faịlụ iji jide n'aka na faịlụ ma ọ bụ ibu. Common image formats, akwụkwọ na-edebe ihe ochie na-ekwe ka ịhụchalụ ozugbo.
Nzọụkwụ 4 Zọpụta natara faịlụ na ọzọ nkebi ma ọ bụ disk
Mgbe ịlele faịlụ mgbake, pịa "Naghachi" iji weghachite ha. Ihe i kwesịrị iburu n'uche bụ: adịghị ịzọpụta natara faịlụ na otu ebe ị kwụsịrị ha, bụrụ na ị overwrite ha. Ọ bụrụ na ị na-adịghị-niile faịlụ, na-ehichapụ faịlụ ga-overwritten maka ọhụrụ gị faịlụ 'nchekwa.
Atụmatụ: Tupu "Efu Mkpofu", biko ego na ahịhịa Bin ọma. Ọ bụrụ na ị na-ahụ ihe bara uru, ị nwere ike mata ndị na ọkọdọ ezighị ziga ya ebe ahụ na ịdọrọ ha Mkpofu iji zere nke a data ọnwụ isi ọwụwa.
Olee otú ọcha gị MacBook Pro / MacBook Air / iMac
Aspyr Media American McGee si Alice maka Mac
MacBook Draịvụ Iweghachite Tutorial
> Resource> Mac> The Ultimate Guide naghachi ehichapụ faịlụ site bupụrụ Mkpofu na Mac OS X